၈ လ အကြာ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး အခြေအနေ
၂၉ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
၈ လ အကွာ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး အခွအေနေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူ အုပ်ချုပ်လာတာ (၈) လ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အခရာအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ အေးချမ်းသာယာမှု အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိနေပါပြီလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ နေများကွန်ရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြီးမြင့်နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီနေ့ ကျနော် ဦးကြီးမြင့်ကို မေးချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  လက်ရှိအခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီလဲ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတော့ စစ်ကောင်စီ အုပ်ချုပ်လာတာလည်း (၁) နှစ်ရဲ့  သုံးပုံနှစ်ပုံကျိုးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ နောက်တခုကတော့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးလို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး။ ပိပြားသွားရင်တော့ ဘယ်ကောင်းတော့မလဲ။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့  အေးချမ်းသာယာမှု ဘယ်လောက်အခြေအနေ ကောင်းလာသလဲလို့ မေးချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအဆင့်ကတော့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တောင် ပြောမယ်ဆိုရင် မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ စီရင်ထုံးဥပဒေဆိုတာ ရှိတယ်။ တရားမျှတမှုရှိကြောင်း အများမြင်စေရာ၏ ဆိုပြီရှိတယ်။ အဲဒီဟာကို သူုတို့က မလိုက်နာဘူးလို့ တရားဝင်ကြေညာလိုက်တော့ နိုင်ငံသားများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေ - (၂၄) နာရီထက် …. လူတယောက်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ လူဖမ်းဝရမ်းပါရမယ်။ ရှာဖွေဝရမ်းပါရမယ်။ ပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် ရှာဖွေခွင့်တွေ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှ လုပ်ရမယ်။ နောက်တခါ လူတယောက်ကို နောက်ယောင်ခံ မလိုက်ရဘူး။ ချိုးဖောက်ခံရရင် ရဲတိုင်။ အမှုမဖွင့်လို့ရှိရင် အဲဒီအမှုမဖွင့်ပေးတဲ့ရဲကို အရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေကို မလိုက်နာတော့ဘူးလို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ကြေညာလိုက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောခဲ့တယ်။ နောက်တခါ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ဒီဟာက အရေးယူအပြစ်ပေးမယ့် လူတွေကို လိုက်ရှာတာ။ နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေ၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ စသည်ဖြင့် သူတို့တွေရဲ့  ဘဝကကော ဒီဘောင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားမှု ရှိနိုင်ပါသလဲ။ သူတို့တွေရဲ့  အနေအထိုင်ကော ကျဉ်းကျပ်သလား။ သူတို့တွေကိုကော ဒီလိုပဲ ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေ၊ မလိုအပ်ဘဲ လုပ်ဆောင်နေတာများ တွေ့ရပါသလား။ သူတို့ဘဝကို ဘယ်လောက်အထိ လုံခြုံလွတ်လပ်မှု ရှိနေပါသလဲ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မဟုတ်ကြတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေဘဝ။
ဖြေ ။ ။ အခုန ကျနော်ပြောတဲ့ ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတွေကို မလိုက်နာတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကြတော့ လက်ရှိအစိုးရဟာ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တော့ဘူး။ မဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ သူတို့က လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်။ ပစ္စည်းလုမယ်။ လူသတ်မယ်။ မီးရှို့ မယ်။ အဲဒါတွေကို သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်ခွင့်ရှိသွားပြီလို့ ခံယူလိုက်ပုံရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုတော့ လူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် အသတ်ခံရတယ်။ နောက်တခါ မီးရှို့ ခံရတယ်။ ပစ္စည်းတွေ လုခံရတယ်။ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်မှာ အိမ်ထဲဝင်လာတယ်၊ ပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်။ ပိုက်ဆံတွေယူသွားတယ်။ စားသောက်စရာတွေယူသွားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ လူတွေကလည်း ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ တချို့ ပညာတတ်တွေက ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် လူကိုသေစေနိုင်တဲ့အထိ ခုခံနိုင်တာပဲ။ ဒီလိုလူသတ်၊ ပစ္စည်းလု အဲဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ ဒါဆို လူကိုသေစေတဲ့အထိ ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခုခံရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေဝင်လာတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လူထုက အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေက တတ်နိုင်သမျှ ခုခံဖို့ကြိုးစားလာတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။
မေး ။ ။ အခု ဖမ်းဆီးပြီးတော့ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေရဲ့  ကိစ္စလည်း ကြားရပါတယ်။ တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးတယ်။ အဲဒီတရားစွဲဆိုတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေက တရားဥပဒေနဲ့ ညီညွှတ်ပါရဲ့ လား။ ရှေ့ နေရှေ့ ရပ်တွေနဲ့ စစ်ဆေးနေတဲ့ကိစ္စတွေက ဘယ်လောက်အထိ ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်နေပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ တရားရုံးတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကတော့ တရားမျှတမှု လုံးဝမရနိုင်ဘူး။ အပေါ်ကြောက်ရတဲ့ တရားသူကြီးတွေ၊ ဥပဒေအရာရှိတွေက တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဲဘူး။ အကြောက်တရားအောက်မှာ နေကြရတော့ တရားမျှတမှု မရနိုင်ဘူး။ သို့သော်လဲပဲ စစ်ကောင်စီကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေ လျှော့ပေါ့တာတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်တယ်။ သူတို့ဘက်ကလဲ လိုက်လျောတယ်ပေါ့။ သို့သော်လဲ အဲဒါတွေက မလုံလောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူပေါင်းငါးထောင်ကိုးရာလောက် အင်စိန်ထောင်မှာ (၅၀၅) တွေ၊ နိုင်ငံရေးမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေက တစ်ယောက်မှ မလွတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခုက ဘာလဲဆိုတော့ စစ်ခုံရုံးတင်တဲ့ဟာတော့ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စစ်မနေပါဘူး။ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ချလိုက်တာပဲ။ သို့သော် အရပ်ဘက်တရားရုံးတွေမှာ စစ်ရတဲ့အခါမှာတော့ ရှေ့ နေတွေ ခေါ်ခွင့်ပြုတာတို့၊ ခုခံချေပခွင့် ပေးတာတို့ တရားလိုဘက်ကို သက်သေပြတာတို့ အဲဒီလောက် အထိုက်အလျောက်လုပ်ပြီးတော့ သူလဲ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ချလိုက်တာပဲ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ ၅၀၅ (က) (ခ) တွေဆို အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တာပဲ။
မေး ။ ။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လို အမှုမျိုးဆိုရင် နိုင်ငံတော်က အထူးစိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါတော့ ဒေါ်စုက ဥပဒေလေးစားတယ်ဆိုတော့ ဥပဒေအတိုင်းလုပ်ပါ။ ကျမ ဥပဒေအတိုင်း ခုခံမယ်ဆိုပြီး သူ့ရှေ့ နေကိုပြောတယ်။ ရှေ့ နေတွေကို ညွှန်ကြားတယ်။ သူတို့ဘက်က တတ်နိုင်သမျှ ဥပဒေနဲ့အညီ ခုခံမှာတော့ သေချာတယ်။ သို့သော် ဘယ်လောက်အောင်မြင်မယ်၊ မအောင်မြင်မယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ကတော့ သိနေပါတယ်။ သို့သော် နမိတ်ကြိုမဖတ်ချင်ပါဘူး။ သို့သော်လဲပဲ အချုပ်တခု ကျနော်ပြောချင်တာက သူကတော့ concern relation - ကြောင်းချင်းရာဆိုင်ရာ ဥပဒေတခု ရှိတယ်။ အဲဒါကို တရုတ်မီဒီယာတခုက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို အင်တာဗျူးလုပ်တယ်။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာ မီဒီယာက ဘာမေးသလဲဆိုရင် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရှိနေတုန်း၊ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတုန်းက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါသလားလို့ မေးတဲ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ မှန်ပါတယ်၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီဟာက ကျနော်တို့ဥပဒေမှာ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကနေ တရားဝင်ပြောတာ။ သတင်းစာတွေထဲမှာလည်း ပါပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လို့ သူကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားရင် တရားမစွဲဆိုမီ - ဒါကတော့ concern relation ပေါ့။ အကြောင်းအချင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအနေနဲ့ ကျနော်တို့ မြင်တာကို ပြောတာပါ။
မေး ။ ။ ဒါကတော့ စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့။ စောစောက ဦးကြီးမြင့် ပြောခဲ့သလို ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တော့ ငါတို့လုပ်ရမှာပဲ။ ဒီအတိုင်းတော့ လုပ်ရမှာပဲ။ လုပ်တဲ့နေရာမှာ အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်မှုတွေ မရှိဘူးလား။ တချို့ ကိစ္စတွေတော့ ကြားနေရတယ်။ ဒလန်လို့ဆိုကာ အထောက်အထားမဲ့ - သူတို့ဆီမှာလဲ တရားဥပဒေမရှိတော့ အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုလုပ် သက်သေပြနိုင်မလဲ။ ဥပမာ ယာဉ်ထိုင်ရဲတို့ ဘာတို့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ သေဆုံးကြတဲ့လူတွေလည်း ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကြီးမြင့် ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော် အခုနအစပြောပြီးပြီ - တရားမျှတမှုရှိကြောင်း အများမြင်စေရ၏ ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို (၁၉၆၆) မှာ ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ တရားသူကြီးအဖွဲ့ကနေ ဥပဒေပြုခဲ့တာပါ။ အဲဒီတော့ တရားမျှတမှုရှိကြောင်းဆိုတာ ဟိုဘက်က စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း ပြပေါ့။ သူတို့သတ်တယ်၊ မီးရှို့ တယ်၊ ခေါင်းကိုပစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုတရားမျှတမှု ရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ ပြပေါ့။ ဒီဘက်ကလည်း ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာ ဆန္ဒပြတဲ့ နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာ ဘာသေနတ်မှလည်း မကိုင်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြကြတယ်။ အဲဒီလိုပြတဲ့ဟာတွေကို ပစ်သတ်တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ပစ်သလဲဆိုရင် မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့မှာ (၁) ရက်ထဲနဲ့ လူ (၁၇၀) လောက် ပစ်သတ်ခံရတယ်။ ခေါင်းတွေကို ပစ်တာ။ အဲဒါတွေက သက်သေပြနိုင်တယ်။ အဲဒီမှာ အထွဋ်အထိပ်တွေ ရောက်ပြီးတော့ လူတွေက ဝိုင်းဝန်းပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေက ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဒီဘက်က ပြနေတယ်။ တဘက် စကစကလည်း ပြပေါ့။ သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ပြပေါ့။ အဲဒီလိုပြတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာကတော့ အကြမ်းဖက်မှုကို လုံးဝလက်မခံဘူး။ တကမ္ဘာလုံးက အကြမ်းဖက်မှုမှန်ရင်တော့ ရှုတ်ချတယ်။
မေး ။ ။ ဦးကြီးမြင့်ရဲ့  အတွေ့အကြုံအရ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက်မှာ ဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်မှာလည်း အဲဒီလို ရဲတွေဘက်က လွန်ကျွံပြီးတော့ လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရင်နဲ့ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာများ ရှိခဲ့ဖူးပါလား။ အဲဒါကို မှတ်မိသလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီလိုပြန်ပြီးတော့ အရေးယူတယ်ဆိုတာလဲ (၆၂) နောက်ပိုင်း ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့မှာလည်း မရှိပါဘူး။ အလုပ်သမားအရေးအခင်းတွေ အမျိုးစုံပါပဲ အဲဒါတွေမှာလည်း မရှိပါဘူး။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာလည်း မရှိပါဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံးက ထပ်တလဲလဲ ကျူးလွန်နိုင်ခြင်းက အဲဒီလို အရေးယူမှု မရှိလို့ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သွားတွေ့ရပါတယ်။
မေး ။ ။ စောစောက ဦးကြီးမြင့်ပြောတဲ့အထဲမှာ အစိုးရအဆက်ဆက်ကို ဖော်ပြသွားတယ်။ ဆိုတော့ NLD အစိုးရ အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ (၅) နှစ်တာ ကာလမှာကော အဲဒီလိုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ NLD အစိုးရနဲ့လည်း ရန်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ကျနော်က NLD ပါတီဝင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာပါတီဝင်မှလဲ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ တရားဥပဒေ ရှုထောင့်ကနေ NLD လည်း ဝေဖန်ခဲ့တာပဲ။ တရားရေးရာကို မထိန်းနိုင်သမျှ ခင်များတို့ အစိုးရက ဘာမှသုံးမရဘူး။ ခင်များတို့ကလည်း ၂၀၀၈ ကို ပြခဲ့တာပဲ။ ၂၀၀၈ ဥပဒေအရ ကျမတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ တရားရေးမှာ တရားသူကြီးချုပ် ခန့်ခွင့်မရှိဘူး။ ခင်များတို့ကလည်း ပြောမှာပဲ။ ကျုပ်တို့ကလည်း ပြောမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ခင်များတို့လည်း တာဝန်ရှိတယ်။ အဲဒီလို တာဝန်မရှိဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူးဆိုတာကို အစဉ်တစိုက် ကျနော်တို့ စိုက်လိုက်မတ်မတ် ပြောလာခဲ့တယ်။ သို့သော် အဆိုးကြီးနဲ့ အဆိုးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးတခုအနေနဲ့ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ခပ်တိုတို ပြောချင်တာက ဦးကြီးမြင့် မျှော်လင့်ပါသလား။ မြန်မာနိုင်ငံက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့၊ ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ စကစဘက်ကနေ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲလိုက်ပြီ။ ဒါက နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ပါဆိုတာကို သူက စပြီးတော့ လိုက်လျောပြီ။ နောက်တချက်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါဆိုတဲ့အဆင့်ကို သူလည်း စဉ်းစားနေမှာပဲ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ အကုန်လုံးက စေ့စပ်ဖြေရှင်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းကို သုံးပါလို့ ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်ထင်တာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ စဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တိုိ့က နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်။ (၁) Peace Keeping Forces တွေ UN က လွှတ်ပြီးတော့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာကို အတင်းလုပ်ရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့  တောင်းဆိုချက်တွေကို နားထောင်ပြီးတော့၊ လိုက်လျောပြီးတော့ ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ စေ့စပ်ပြေငြိမ်း ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကို ထူထောင်မလားဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ ရောက်နေပြီ။ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို လုပ်ရင်နဲ့ ရောက်လို့ အောင်မြင်သွားရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံ တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်မယ်လို့ နိဂုံးချုပ်ပြောလိုပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးယူပွီး အုပျခြုပျလာတာ (၈) လ ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံ့အုပျခြုပျရေးမှာ အခရာအကဆြုံးဖွဈတဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ အေးခမျြးသာယာမှု အခွအေနေ ဘယျလို ရှိနပေါသလဲ။ မွနျမာနိုငျငံရှနေ့မြေားကှနျရကျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကွီးမွငျနဲ့ ဦးကြျောဇံသာတို့ ဆှေးနှေးသုံးသပျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီနေ့ ကနြျော ဦးကွီးမွငျ့ကို မေးခငျြတာကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဘယျလောကျအထိ တိုးတကျကောငျးမှနျလာပွီလဲ။ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးတော့ စဈကောငျစီ အုပျခြုပျလာတာလညျး (၁) နှဈရဲ့ သုံးပုံနှဈပုံကြိုးခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ဘယျလောကျရှိပွီလဲ။ နောကျတခုကတော့ ငွိမျဝပျပိပွားရေးလို့တော့ မပွောခငျြပါဘူး။ ပိပွားသှားရငျတော့ ဘယျကောငျးတော့မလဲ။ အဲဒီတော့ တိုငျးပွညျရဲ့ အေးခမျြးသာယာမှု ဘယျလောကျအခွအေနေ ကောငျးလာသလဲလို့ မေးခငျြပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအဆငျ့ကတော့ အနိမျ့ဆုံးအဆငျ့တောငျ ပွောမယျဆိုရငျ မရှိတော့ဘူးလို့ပွောရငျ ပိုမှနျပါတယျ။ ကနြျောတို့ဆီမှာ စီရငျထုံးဥပဒဆေိုတာ ရှိတယျ။ တရားမြှတမှုရှိကွောငျး အမြားမွငျစရော၏ ဆိုပွီရှိတယျ။ အဲဒီဟာကို သူုတို့က မလိုကျနာဘူးလို့ တရားဝငျကွညောလိုကျတော့ နိုငျငံသားမြား၏ လှတျလပျခှငျ့ကို ကာကှယျတဲ့ ဥပဒေ - (၂၄) နာရီထကျ …. လူတယောကျကို ဖမျးသှားတယျ။ လူဖမျးဝရမျးပါရမယျ။ ရှာဖှဝေရမျးပါရမယျ။ ပိုငျနကျအတှငျး ဝငျရောကျခှငျ့ ရှာဖှခှေငျ့တှေ ခှငျ့ပွုခကျြရှိမှ လုပျရမယျ။ နောကျတခါ လူတယောကျကို နောကျယောငျခံ မလိုကျရဘူး။ ခြိုးဖောကျခံရရငျ ရဲတိုငျ။ အမှုမဖှငျ့လို့ရှိရငျ အဲဒီအမှုမဖှငျ့ပေးတဲ့ရဲကို အရေးယူရမယျဆိုတဲ့ ဥပဒပွေဌာနျးခကျြတှကေို မလိုကျနာတော့ဘူးလို့ ဖဖေျေါဝါရီလ (၁၃) ရကျနမှေ့ာ ကွညောလိုကျတယျ။ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျက ပွောခဲ့တယျ။ နောကျတခါ တကယျ့အရေးကွီးတဲ့ နိုငျငံသားတှကေို ကာကှယျရေးဥပဒတှေကေို ဖကျြပဈလိုကျတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ဒီဟာက အရေးယူအပွဈပေးမယျ့ လူတှကေို လိုကျရှာတာ။ နိုငျငံရေးတှဘောတှေ သူတို့ကို ဆနျ့ကငျြမှုနဲ့ မပတျသကျတဲ့ သာမနျပွညျသူတှေ၊ ဈေးရောငျးဈေးဝယျတှေ၊ ဝနျထမျးတှေ စသညျဖွငျ့ သူတို့တှရေဲ့ ဘဝကကော ဒီဘောငျထဲမှာ ဘယျလောကျအထိ လှတျလှတျလပျလပျ လှုပျရှားမှု ရှိနိုငျပါသလဲ။ သူတို့တှရေဲ့ အနအေထိုငျကော ကဉျြးကပျြသလား။ သူတို့တှကေိုကော ဒီလိုပဲ ဖမျးဆီးအရေးယူမှုတှေ၊ မလိုအပျဘဲ လုပျဆောငျနတောမြား တှရေ့ပါသလား။ သူတို့ဘဝကို ဘယျလောကျအထိ လုံခွုံလှတျလပျမှု ရှိနပေါသလဲ။ တကျကွှလှုပျရှားသူ မဟုတျကွတဲ့ သာမနျပွညျသူတှဘေဝ။
ဖွေ ။ ။ အခုန ကနြျောပွောတဲ့ ကာကှယျတဲ့ဥပဒတှေကေို မလိုကျနာတော့ဘူးလို့ပွောတဲ့အခါကွတော့ လကျရှိအစိုးရဟာ ပွညျသူကို ကာကှယျပေးတဲ့ အစိုးရ မဟုတျတော့ဘူး။ မဟုတျတဲ့အခါကွတော့ သူတို့က လုပျခငျြရာလုပျမယျ။ ပစ်စညျးလုမယျ။ လူသတျမယျ။ မီးရှို့မယျ။ အဲဒါတှကေို သူတို့ လုပျခငျြသလို လုပျခှငျ့ရှိသှားပွီလို့ ခံယူလိုကျပုံရတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခုတော့ လူပေါငျးတဈထောငျကြျော အသတျခံရတယျ။ နောကျတခါ မီးရှို့ခံရတယျ။ ပစ်စညျးတှေ လုခံရတယျ။ ကနြျောတို့ ရနျကုနျမွို့ပျေါမှာ အိမျထဲဝငျလာတယျ၊ ပစ်စညျးတှယေူသှားတယျ။ ပိုကျဆံတှယေူသှားတယျ။ စားသောကျစရာတှယေူသှားတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးတှေ တှနေ့ရေတယျ။ အဲဒီလိုဖွဈတဲ့အခါကွတော့ လူတှကေလညျး ဘာဖွဈလာလဲဆိုတော့ တခြို့ပညာတတျတှကေ ဒီလိုလုပျမယျဆိုရငျ လူကိုသစေနေိုငျတဲ့အထိ ခုခံနိုငျတာပဲ။ ဒီလိုလူသတျ၊ ပစ်စညျးလု အဲဒါမြိုးတှလေုပျလို့ မရဘူးလေ။ ဒါဆို လူကိုသစေတေဲ့အထိ ခုခံနိုငျတယျဆိုတဲ့ ဥပဒေ ရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ခုခံရမယျဆိုတဲ့ အတှေးတှဝေငျလာတယျ။ အဲဒီအခါမှာ လူထုက အထူးသဖွငျ့ လူငယျတှကေ တတျနိုငျသမြှ ခုခံဖို့ကွိုးစားလာတယျဆိုတာကို ကနြျောတို့ တှရေ့တယျ။
မေး ။ ။ အခု ဖမျးဆီးပွီးတော့ တရားရုံးမှာ အမှုရငျဆိုငျနရေတဲ့လူတှရေဲ့ ကိစ်စလညျး ကွားရပါတယျ။ တရားရုံးမှာ စဈဆေးတယျ။ အဲဒီတရားစှဲဆိုတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စတှကေ တရားဥပဒနေဲ့ ညီညှတျပါရဲ့လား။ ရှနေ့ရှေရေ့ပျတှနေဲ့ စဈဆေးနတေဲ့ကိစ်စတှကေ ဘယျလောကျအထိ ဥပဒအေတိုငျး ဖွဈနပေါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ တရားရုံးတှမှော ဖွဈနတေဲ့ကိစ်စရပျတှကေတော့ တရားမြှတမှု လုံးဝမရနိုငျဘူး။ အပျေါကွောကျရတဲ့ တရားသူကွီးတှေ၊ ဥပဒအေရာရှိတှကေ တုတျတုတျမှမလှုပျရဲဘူး။ အကွောကျတရားအောကျမှာ နကွေရတော့ တရားမြှတမှု မရနိုငျဘူး။ သို့သျောလဲပဲ စဈကောငျစီကနေ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့တှေ လြှော့ပေါ့တာတှေ အကွိမျကွိမျလုပျတယျ။ သူတို့ဘကျကလဲ လိုကျလြောတယျပေါ့။ သို့သျောလဲ အဲဒါတှကေ မလုံလောကျဘူး ဖွဈနတေယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လူပေါငျးငါးထောငျကိုးရာလောကျ အငျစိနျထောငျမှာ (၅၀၅) တှေ၊ နိုငျငံရေးမှုတှနေဲ့ ဖမျးဆီးထားတဲ့လူတှကေ တဈယောကျမှ မလှတျဘူး ဖွဈနတေယျ။ နောကျတခုက ဘာလဲဆိုတော့ စဈခုံရုံးတငျတဲ့ဟာတော့ သိပျရှညျရှညျဝေးဝေး စဈမနပေါဘူး။ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျ ခလြိုကျတာပဲ။ သို့သျော အရပျဘကျတရားရုံးတှမှော စဈရတဲ့အခါမှာတော့ ရှနေ့တှေေ ချေါခှငျ့ပွုတာတို့၊ ခုခံခပြေခှငျ့ ပေးတာတို့ တရားလိုဘကျကို သကျသပွေတာတို့ အဲဒီလောကျ အထိုကျအလြောကျလုပျပွီးတော့ သူလဲ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျ ခလြိုကျတာပဲ။ အထူးသဖွငျ့ နိုငျငံရေးမှုနဲ့ ၅၀၅ (က) (ခ) တှဆေို အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျခလြိုကျတာပဲ။
မေး ။ ။ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့လို အမှုမြိုးဆိုရငျ နိုငျငံတျောက အထူးစိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နရေတဲ့ကိစ်စ ဖွဈပါတယျဆိုတော့ ဘယျလောကျမှနျမှနျကနျကနျ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့လို့ရနိုငျပါသလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါတော့ ဒျေါစုက ဥပဒလေေးစားတယျဆိုတော့ ဥပဒအေတိုငျးလုပျပါ။ ကမြ ဥပဒအေတိုငျး ခုခံမယျဆိုပွီး သူ့ရှနေ့ကေိုပွောတယျ။ ရှနေ့တှေကေို ညှနျကွားတယျ။ သူတို့ဘကျက တတျနိုငျသမြှ ဥပဒနေဲ့အညီ ခုခံမှာတော့ သခြောတယျ။ သို့သျော ဘယျလောကျအောငျမွငျမယျ၊ မအောငျမွငျမယျဆိုတာတော့ ကနြျောတို့ကတော့ သိနပေါတယျ။ သို့သျော နမိတျကွိုမဖတျခငျြပါဘူး။ သို့သျောလဲပဲ အခြုပျတခု ကနြျောပွောခငျြတာက သူကတော့ concern relation - ကွောငျးခငျြးရာဆိုငျရာ ဥပဒတေခု ရှိတယျ။ အဲဒါကို တရုတျမီဒီယာတခုက ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကို အငျတာဗြူးလုပျတယျ။ နောကျဆုံးမေးခှနျးမှာ မီဒီယာက ဘာမေးသလဲဆိုရငျ - ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အာဏာရှိနတေုနျး၊ တိုငျးပွညျတာဝနျထမျးဆောငျနတေုနျးက ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျခဲ့တယျလို့ ယူဆပါသလားလို့ မေးတဲ့အခါမှာ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျက ပွုံးပွုံးရှငျရှငျနဲ့ မှနျပါတယျ၊ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျခဲ့ပါတယျလို့ ပွောတယျ။ အဲဒီဟာက ကနြျောတို့ဥပဒမှော သိပျအရေးကွီးတယျ။ အမွငျ့ဆုံး ပုဂ်ဂိုလျကနေ တရားဝငျပွောတာ။ သတငျးစာတှထေဲမှာလညျး ပါပါတယျ။ ဗီဒီယိုမှတျတမျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒီမှတျခကျြအရဆိုရငျတော့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျခဲ့တဲ့လူတယောကျလို့ သူကိုယျတိုငျ ဝနျခံထားရငျ တရားမစှဲဆိုမီ - ဒါကတော့ concern relation ပေါ့။ အကွောငျးအခငျြးဆိုငျရာ ဥပဒအေနနေဲ့ ကနြျောတို့ မွငျတာကို ပွောတာပါ။
မေး ။ ။ ဒါကတော့ စဈကောငျစီဘကျကပေါ့။ စောစောက ဦးကွီးမွငျ့ ပွောခဲ့သလို ပွညျသူလူထုတရပျလုံးက ခုခံကာကှယျပိုငျခှငျ့တော့ ငါတို့လုပျရမှာပဲ။ ဒီအတိုငျးတော့ လုပျရမှာပဲ။ လုပျတဲ့နရောမှာ အလှနျအကြှံလုပျဆောငျမှုတှေ မရှိဘူးလား။ တခြို့ကိစ်စတှတေော့ ကွားနရေတယျ။ ဒလနျလို့ဆိုကာ အထောကျအထားမဲ့ - သူတို့ဆီမှာလဲ တရားဥပဒမေရှိတော့ အထောကျအထားတှနေဲ့ ပွဈမှုထငျရှားတယျဆိုပွီး ဘယျလိုလုပျ သကျသပွေနိုငျမလဲ။ ဥပမာ ယာဉျထိုငျရဲတို့ ဘာတို့ ဘာမှမဆိုငျဘဲနဲ့ သဆေုံးကွတဲ့လူတှလေညျး ရှိမယျလို့ ထငျပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဦးကွီးမွငျ့ ဘာပွောခငျြပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျော အခုနအစပွောပွီးပွီ - တရားမြှတမှုရှိကွောငျး အမြားမွငျစရေ၏ ဆိုတဲ့ ဥပဒကေို (၁၉၆၆) မှာ ဒေါကျတာမောငျမောငျတို့ တရားသူကွီးအဖှဲ့ကနေ ဥပဒပွေုခဲ့တာပါ။ အဲဒီတော့ တရားမြှတမှုရှိကွောငျးဆိုတာ ဟိုဘကျက စဈကောငျစီဘကျကလညျး ပွပေါ့။ သူတို့သတျတယျ၊ မီးရှို့တယျ၊ ခေါငျးကိုပဈတယျဆိုတာ ဘယျလိုတရားမြှတမှု ရှိတယျဆိုတာကို သကျသအေထောကျအထားတှနေဲ့ ပွပေါ့။ ဒီဘကျကလညျး ဖဖေျေါဝါရီလထဲမှာ ဆန်ဒပွတဲ့ နှဈပတျလောကျအတှငျးမှာ ဘာသနေတျမှလညျး မကိုငျဘူး။ ဒီအတိုငျးပဲ လကျနကျမဲ့ ဆန်ဒပွကွတယျ။ အဲဒီလိုပွတဲ့ဟာတှကေို ပဈသတျတယျ။ ဘယျလောကျတောငျ ပဈသလဲဆိုရငျ မတျလ (၂၇) ရကျနေ့ တျောလှနျရေးနမှေ့ာ (၁) ရကျထဲနဲ့ လူ (၁၇၀) လောကျ ပဈသတျခံရတယျ။ ခေါငျးတှကေို ပဈတာ။ အဲဒါတှကေ သကျသပွေနိုငျတယျ။ အဲဒီမှာ အထှဋျအထိပျတှေ ရောကျပွီးတော့ လူတှကေ ဝိုငျးဝနျးပွနျခမြယျဆိုတဲ့ စိတျတှကေ ခုခံကာကှယျခှငျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ အခကျြကို ဒီဘကျက ပွနတေယျ။ တဘကျ စကစကလညျး ပွပေါ့။ သူတို့ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုလုပျရတယျဆိုတာကို ပွပေါ့။ အဲဒီလိုပွတဲ့အခါမှာ နိုငျငံတကာကတော့ အကွမျးဖကျမှုကို လုံးဝလကျမခံဘူး။ တကမ်ဘာလုံးက အကွမျးဖကျမှုမှနျရငျတော့ ရှုတျခတြယျ။
မေး ။ ။ ဦးကွီးမွငျ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံအရ မွနျမာနိုငျငံသမိုငျးတလြှောကျမှာ ဟိုအစိုးရအဆကျဆကျမှာလညျး အဲဒီလို ရဲတှဘေကျက လှနျကြှံပွီးတော့ လုံခွုံမှုထိနျးသိမျးရငျနဲ့ အဲဒီလိုဖွဈသှားတာတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလူတှကေို ပွနျပွီးတော့ အရေးယူတယျဆိုတဲ့ အစဉျအလာမြား ရှိခဲ့ဖူးပါလား။ အဲဒါကို မှတျမိသလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒီလိုပွနျပွီးတော့ အရေးယူတယျဆိုတာလဲ (၆၂) နောကျပိုငျး ဇူလိုငျ (၇) ရကျနမှေ့ာလညျး မရှိပါဘူး။ အလုပျသမားအရေးအခငျးတှေ အမြိုးစုံပါပဲ အဲဒါတှမှောလညျး မရှိပါဘူး။ ရှဝေါရောငျတျောလှနျရေးမှာလညျး မရှိပါဘူး။ နှဈဘကျစလုံးက ထပျတလဲလဲ ကြူးလှနျနိုငျခွငျးက အဲဒီလို အရေးယူမှု မရှိလို့ဆိုတာကို ကနြျောတို့ သှားတှရေ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ စောစောက ဦးကွီးမွငျ့ပွောတဲ့အထဲမှာ အစိုးရအဆကျဆကျကို ဖျောပွသှားတယျ။ ဆိုတော့ NLD အစိုးရ အုပျခြုပျသှားတဲ့ (၅) နှဈတာ ကာလမှာကော အဲဒီလိုမြိုး ရှိခဲ့ပါသလား။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ကတော့ NLD အစိုးရနဲ့လညျး ရနျဖွဈခဲ့တာပဲ။ ကနြျောက NLD ပါတီဝငျလညျး မဟုတျဘူး။ ဘာပါတီဝငျမှလဲ မဟုတျဘူး။ ကနြျောတို့ တရားဥပဒေ ရှုထောငျ့ကနေ NLD လညျး ဝဖေနျခဲ့တာပဲ။ တရားရေးရာကို မထိနျးနိုငျသမြှ ခငျမြားတို့ အစိုးရက ဘာမှသုံးမရဘူး။ ခငျမြားတို့ကလညျး ၂၀၀၈ ကို ပွခဲ့တာပဲ။ ၂၀၀၈ ဥပဒအေရ ကမြတို့မှာ လုပျပိုငျခှငျ့ မရှိဘူး။ တရားရေးမှာ တရားသူကွီးခြုပျ ခနျ့ခှငျ့မရှိဘူး။ ခငျမြားတို့ကလညျး ပွောမှာပဲ။ ကြုပျတို့ကလညျး ပွောမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ခငျမြားတို့လညျး တာဝနျရှိတယျ။ အဲဒီလို တာဝနျမရှိဘူးလို့ ပွောလို့မရဘူးဆိုတာကို အစဉျတစိုကျ ကနြျောတို့ စိုကျလိုကျမတျမတျ ပွောလာခဲ့တယျ။ သို့သျော အဆိုးကွီးနဲ့ အဆိုးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးတခုအနနေဲ့ နိဂုံးခြုပျအနနေဲ့ ခပျတိုတို ပွောခငျြတာက ဦးကွီးမွငျ့ မြှျောလငျ့ပါသလား။ မွနျမာနိုငျငံက တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး ထှနျးကားတဲ့ နိုငျငံတခု ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့၊ ဘယျအခြိနျလောကျမှာ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ စကစဘကျကနေ ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှဈ အပဈခတျရပျစဲလိုကျပွီ။ ဒါက နိုငျငံတကာက တောငျးဆိုနတေဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှေ ရပျပါဆိုတာကို သူက စပွီးတော့ လိုကျလြောပွီ။ နောကျတခကျြက နိုငျငံရေးအကဉျြးသားတှေ လှတျပေးပါဆိုတဲ့အဆငျ့ကို သူလညျး စဉျးစားနမှောပဲ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံကွီးတှေ အကုနျလုံးက စစေ့ပျဖွရှေငျး ငွိမျးခမျြးတဲ့နညျးကို သုံးပါလို့ ပွောလာတဲ့အပျေါမှာ ကနြျောထငျတာကတော့ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျအနနေဲ့ စဉျးစားလိမျ့မယျလို့ ထငျတယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့က နှဈမြိုးပဲ ရှိတယျ။ (၁) Peace Keeping Forces တှေ UN က လှတျပွီးတော့ စစေ့ပျညှိနှိုငျးတာကို အတငျးလုပျရမှာလား။ ဒါမှမဟုတျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျက ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့ တောငျးဆိုခကျြတှကေို နားထောငျပွီးတော့၊ လိုကျလြောပွီးတော့ ကိုယျ့အခငျြးခငျြးပဲ စစေ့ပျပွငွေိမျး ငွိမျးခမျြးပွီးတော့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတျောကွီးကို ထူထောငျမလားဆိုတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါတော့ ရောကျနပွေီ။ အဲဒီလမျးကွောငျးပျေါကို လုပျရငျနဲ့ ရောကျလို့ အောငျမွငျသှားရငျတော့ ကနြျောတို့နိုငျငံ တရားဥပဒစေိုးမိုးတဲ့ နိုငျငံဖွဈမယျလို့ နိဂုံးခြုပျပွောလိုပါတယျ။
NCGUB နဲ့ NUG တို့အပေါ် နိုင်ငံတကာသဘောထား ဘာကွာသလဲ
NUG ရဲ့  နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ဘယ်လိုလဲ